OPINIONS – DigitalTimes
၂၀၁၈ မှာဖုန်းဝယ်မယ်ဆို display ratio က ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာလား??
၂၀၁၇ ကတော့ ဖုန်းတွေကို ဒီဇိုင်းသစ် ပုံစံသစ် ratio အသစ်နဲ့ ဆန်းသစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို စမတ်ဖုန်းထုတ်ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများက ဖုန်းရဲ့အနားသတ်ဘောင်တွေ ဘေးဘက်၊အပေါ်၊ အောက် စသဖြင့် အကုန်လုံးကို…
Day in Tech History HUBS Knowledge NEWS OPINIONS Others Tech Update Trends Vivo
Vivo ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် အမှတ်တရ မှတ်တိုင်များ
၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ Vivo စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ပြီး မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာပဲ အခြားသော ခြေလှမ်းများကို စတင်ခဲ့ပါသည်။…
Android HUBS OPINIONS Trends
အခန်း (၁) “ လဲသေလိုက် လေ။ အဲဒီလိုသောက်သုံးမကျတဲ့လူတစ်ယောက် အကြောင်းကိုဘာများအထွေအထူးဆွေးနွေးနေရမှာလဲ .. ” …. လို့ စတိဗ် ဂျော့ဘ် က အင်တာဗျူး တခုမှာရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောခဲ့ဖူးတယ်…
FEATURES Gadgets gadgets HUBS Knowledge Local Local Market Review Local News Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Mobiles & Tablets NEWS OPINIONS Others REVIEWS Vivo
ViVo V5 နှင့် ViVo Y55s ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရတာဟာ တကယ်တမ်းပြောရရင် သိတ်တော့လွယ်ကူလှတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထည့်သွင်းပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ဒီ စီးရီးကတော့ဖြင့် မစွံပါဘူး…
FEATURES Life Style Local Local Market Review Local News OPINIONS
ဖုန်းခေါ်ဆိိုနှုန်းထား အသက်သာဆုံးနဲ့ ဖုန်းပြောနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရအောင်
ဖုန်းဆင်းမ်ကဒ်တွေ ပေါများနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်အော်ပရေတာကို သေချာပေါက် ရွေးချယ်သုံးရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ လူသုံးများနေတဲ့ အော်ပရေတာကြီး သုံးခုဖြစ်တဲ့ MPT နဲ့ အခြား Telecom နှစ်ခုတို့ရဲ့…
CELEBRITY Gadgets HUBS Knowledge Microsoft Mobiles & Tablets NEWS OPINIONS Others PHOTOS
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ သတင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ကာယကံရှင် ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေကြီး သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ် ဟာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာ နဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုင်းမ်…
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဟာ လူမှုကွန်ယက် မှာ သူရဲ့ ပို့စ် ကို ပြန်ဖျက်ခဲ့ရင် ပြစ်မှုမြောက်ပါသလား
ကျွန်တော် မေးဖို့ မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတစ်ယောက် ဟာ လူမှုကွန်ယာက်မှာ သူရဲ့ ပို့စ် (Post) ကို ပြန်ဖျက်ခဲ့ရင် တရားဝင်ပါသလား။ စဉ်းစားပြီး ဖြေကြည့်စေလိုပါတယ်။…
Gadgets HUBS Knowledge Mobile & Tablets Mobiles & Tablets NEWS OPINIONS Others Samsung Tech Update Trends
Home Button မပါဝင်တော့ တဲ့ samsung Galaxy S8 မှာ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ပါဝင်လာ
မူလ က Rumors သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့သလို အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် ဆမ်ဆောင်း Galaxy S8 ဟာ ထူးခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ကြီးကြီးမားမား ပါရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း Forbes…
Apple HUBS NEWS OPINIONS Tech Update
iPhone 8 မှာ အဓိက ပြောင်းလဲမှု (၃) ခု မြင်တွေ့ရမည်
အသစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ အရ MWC2017 မှာ ပွဲထုတ်ဖို့ အရမ်းနီးစပ်နေတဲ့ iPhone မျိးဆက်သစ် မှာ ပြောင်းလဲမှု (၃) ခု ကို ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်…
Facebook FEATURES Google HUBS Knowledge OPINIONS Others Trends TV & Smart Home Device
ဖေ့စ်ဘုတ် နဲ့ ဂူးဂဲလ်၊ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်ချင်သလဲ ..
နည်းပညာလောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ ကုမ္ပဏီအများအပြား ရှိပါတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၊ အေအိုအယ်လ်၊ အက်ပလ်၊ စသဖြင့် နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အခု သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထင်ထင်ရှားရှား…
Gadgets NEWS OPINIONS Tech Update TV & Home Entertainment
6K အရည်အသွေး အထိ ရိုက်ယူနိုင်တဲ့ ပန်နာဆိုးနစ် ကင်မရာ
စမတ်ဖုန်းတွေ က ကင်မရာတွေရဲ့ ရပ်တည်မှု ကို ခြိမ်းခြောက်လာပါပြီ။ . ကင်မရာတွေအတွက် ခက်ခဲလှတဲ့အချိန်တွေပါ။ ရထားတဲ့ နေရာ လွင့်ပျောက်မသွားဖို့ ပြန်လည် တိုက်ပွဲဝင်ရပါပြီ။ ခေတ်ကိုက ကြမ်းရှရှ။…
နည်းပညာ မှာ ကန့်သတ်ချက်ဆိုတာ မရှိဘူး လို့ ရန်ဒီဇူကာဘတ် ပြောကြား
နည်းပညာရှင် ၊ အဆိုတော် ၊ ပွဲစီစဉ်သူ၊ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကက်တင်း ပြုလုပ်သူ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ရန်ဒီဇူကာဘတ် က နည်းပညာ မှာ…
NEWS OPINIONS TV & Home Entertainment
ကလေးဓါတ်ပုံကို ဖေ့စ်ဘုတ် မှာ တင်တော့မယ် ဆိုရင် နှစ်ခါ စဉ်းစားပါ
မိဘတွေ ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သွေး၊ ကလေးငယ်တွေ ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ် လို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တင်တော့မယ် ဆိုရင် နှစ်ကြိမ်၊ နှစ်ခါ…
Apple က ဟောလိဝုဒ် စတူဒီယိုတစ်ခု ကို ဝယ်ယူဖို့ ကြံစည်နေ
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ထဲကို ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတွေ အပြိုင်အဆိုင်ဝင်လာကြရင် နည်းပညာလောကအတွက် ပိုကောင်းလာနိုင်မလား ဆိုတာကို တွေးခဲ့ကြဖူးပါ့မလား။ အခုသတင်းကတော့ အားကစားလောကအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေအတွင်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဟောလိဝုဒ်စတူဒီယို…
FEATURES Gadgets OPINIONS REVIEWS Tech Update TV & Home Entertainment
အထီးကျန်ဝေဒနာကို ကုစားပေးနိုင်မည့် ကိုယ်ရေးလက်ထောက်
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ကြွယ်ဝချမ်းသာသလောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ သံယောဇဉ်တရားတွေ ကုန်ခန်းစပြုလာတဲ့ ဒီနေ့ သတ္တလောကကြီး အတွက် Gatebox က နေ ညဏ်ရည်တု စက်ရုပ်ကလေးတစ်ခု တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ .…